Xukuumadda Qoor-Qoor oo caawa la wareegtay ilihii dhaqaale ee Ahlu-Sunna – Hornafrik Media Network
Ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa caawa la wareegay maamulka maaliyadeed ee baraha Control ee laga soo galo magaalada Dhuusamreeb.
Controllada laga soo galo magaalada oo lagu qaado canshuur ay bixiyaan gadiidleyda is-ticmaasha wadada dheer ayaa waxa ay ku dhici jirtay khasnadda Ahlu-Sunna, waxaana u qaabilsanaa nin ay walaalo yihiin Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo lagu magacaabo Maxamuud Cali Xasan.
Caawa kadib canshuurta ka soo xaroota inta u dhaxeysa magaalooyinka Matabaan iyo Dhuusamareeb oo horay ugu dhici jirtay khasnadda Ahlu-Sunna ayaa loo weeciyey khasnadda wasaaradda maaliyadda ee maamulka Galmudug.
Hoggaanka Ahlu-Sunna oo khilaaf badani kala dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka Madaxweyne Qoor-Qoor ayaan arintan weli ka hadlin.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo maanta kulankii Khamiislaha ahaa ee golaha wasiirrada Galmudug oo uu shir guddoominayey Madaxweyne Qoor-Qoor iyo ku xigeenkiisa Cali Ciid ay ku ansixinta Miisaaniyadda maamulka Galmudug ee sanadkan 2020-ka, taas oo gaareysa 17,230,054.00 ( Todoba iyo toban malyan, laba boqol iyo soddan kun, iyo konton iyo afar doolar).